कीर्तिनिधि विष्ट :प्रधानमन्त्री हुँदा राजालाई थाहै नदिई पूर्वप्रम थापालाई जेल हालेका थिए – USNEPALNEWS.COM
कीर्तिनिधि विष्ट :प्रधानमन्त्री हुँदा राजालाई थाहै नदिई पूर्वप्रम थापालाई जेल हालेका थिए
‘त्यस बेला मैले त्यही गर्नु उचित ठानेँ। अहिले पनि मलाई त्यस कुरामा कुनै पछुतो छैन। उनलाई गिरफ्तार गरेर जेल पठाउनुमा म नै जिम्मेवार हो। त्यसको जस-अपजसको सबै जिम्मेवारी मैले नै बोक्नुपर्छ। राजा वीरेन्द्र सायद थापालाई थुन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएनन्। किनभने, भर्खर राज्यारोहण गरेका राजा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार गरेर जेल हाल्दा उत्पन्न हुन सक्ने परिणामबाट सचेत पनि थिए। तर, थापाको व्यवहार मलाई पटक्कै चित्त बुझेन। मैले राजालाई एक वचन पनि नसोधी सीधै थुन्न निर्देशन दिएँ। र, अर्को दिन राजालाई त्यस कुराको जानकारी गराएँ,’ विष्टले नेपाल साप्ताहिकमा२०७० सालमा प्रकाशित संस्मरणमा भनेका छन्।
कतिपय मानिसहरू ‘राजाले भनेर कीर्तिनिधिले सूर्यबहादुरलाई जेल हाले’ पनि भन्छन्। त्यो गलत कुरा हो। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले नै मैले थापालाई जेल हालेको हुँ। उनलाई जेल हाल्नैपर्ने थियो वा थिएन, त्यो बेग्लै बहसको कुरा हो। अर्कोतर्फ, जेल परेपछि सूर्यबहादुरको छवि कस्तो बन्यो भन्ने कुरा पनि बहसकै विषय होला। तर, पञ्चायतभित्रै रहेर निहित स्वार्थले अभिप्रेरति भई दरबार र सरकारको विरोध गर्नु उचित थिएन, त्यसैको सजायस्वरूप उनले त्यो दण्ड पाएका हुन्। उनलाई ताडना दिने, दुःख दिने, सताउने, स्वाहा पार्ने भन्ने उद्देश्यले मैले उनलाई थुनेको होइन। उनी सही बाटोमा हिँडून् भन्ने मात्र मेरो कामना थियो। उनलाई आफ्ना गल्ती सच्याउने अवसर र मौका प्रदान गर्नुपर्छ भनेर मात्र जेल हालेको हुँ।
पदमा बसेर चुनाव गराउनुहुन्न भन्ने राजा महेन्द्रका साथै मेरो पनि मान्यताका कारण विसं २०२६ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको पदबाट एक वर्षमै हटेँ। तर, राजीनामा दिएर बस्दा पनि राजा महेन्द्रसँग मेरो आत्मीय सम्बन्ध उस्तै थियो। उनी पनि मलाई उत्तिकै इज्जत र सम्मान दिन्थे। म पनि मन खोलेर आफ्ना कुरा राख्थेँ। उनीसँग मेरो सम्पर्क बरोबर थियो। मलाई बेलाबेलामा दरबारबाट बोलावट हुन्थ्यो र मुलुकका समसामयिक विषयमा छलफल हुन्थ्यो।
यसै समयको कुरा हो। राजदरबारमा आयोजित एक रात्रिभोजमा सरकि हुने क्रममा राजा महेन्द्रसँग व्यक्तिगत कुराकानी हुँदा मैले आफ्नो बैठक कक्षमा बाघको छाला सजाउने इच्छा भएको कुरा व्यक्त गरेँ। राजाले ‘अरूले मारेको बाघको छाला कहाँ पाइन्छ? त्यसका लागि त आफैँ सिकार गर्नुपर्छ’ भन्ने जवाफ दिए। उपस्थित सबैलेे सुन्ने गरी राजा महेन्द्रले मलाई थपथपाउँदै भने, “ए कीर्तिनिधि ! तिमी त अलच्छिना रे नि ! तिमी मसँग सँगै गएकाले मलाई हर्टअट्याक भयो रे ! म फेर िसिकार खेल्न जाँदै छु, तिमी पनि हिँड। धीरेन्द्रहरूसँग तिमी आऊ है।”
राजा महेन्द्र सिकार खेल्न गएका बेला भएको हृदयाघातको प्रसंगलाई लिएर दरबारभित्रैका मेरा विरोधीहरूले अनेक हल्ला चलाएका थिए। यहाँसम्म कि ‘कीर्तिनिधि विष्ट अलच्छिना मान्छे रहेछ, त्यो मान्छे राजासँग गएकाले राजालाई हृदयाघात भयो’ भन्नेसम्मका प्रचारबाजी गररिहेका थिए। एक कान, दुई कान, मैदान हुँदै त्यो कुरा राजाका कानसम्म पनि पुगेको रहेछ। राजाकै मुखबाट यस्तो कुरा सुनेपछि मेरा आँसु छचल्किए।
१ वैशाख ०२८ मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएँ। तर, रामराजाप्रसाद सिंहको घटनापछि राजीनामा दिने मन बनाएँ। सिंह राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित भएर आएपछि पनि राजसंस्थाविरुद्धका गतिविधिमा निकै सक्रिय भए। मार्सल लगाएरै उनलाई संसद्बाट निष्कासित गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आयो। उनै सिंहका विषयलाई लिएर राजा महेन्द्रले वक्तव्यसमेत जारी गर्नुपर्‍यो। वक्तव्यमा सिंहका क्रियाकलाप समाधान गर्न नसकेको भनेर प्रधानमन्त्रीमाथि आक्षेप लागेको मलाई महसुस भयो। त्यसपछि मैले राजीनामा दिने मन बनाएँ।
मलाई राजदरबारबाट बोलावट आयो। राजालाई भेटेँ र केही कुराकानीपछि राजीनामाको पत्र बुझाउँदै भनेँ, “सरकारको ममाथि विश्वास छैन भने मैले यस पदमा बस्न मिल्दैन। ममाथि शंका र आक्षेप लागेपछि नैतिकताका आधारमा यस पदमा बसिरहन उचित लागेन। तसर्थ, राजीनामा चढाएको छु।” राजा महेन्द्रले आफ्ना कुरा राख्दै भनेका थिए, “तिमीलाई मैले शंका गरेको छैन। आइन्दा यसरी स-साना कुरामा राजीनामा दिने काम नगर। तिमीले पटक-पटक राजीनामा दिने र मैले तिमीलाई नै थमौती गररिहँदा अरू कोही व्यक्ति नपाएको जस्तो हुन्छ। जुन बेला मैले तिमीलाई छोडुँला, तिमीले पनि मलाई छोड्नू।”
कांग्रेस सिंहले ओलीलाई दिए यस्तो चुनौती
विदेशमन्त्रीमा रेक्स टिलरसनको सम्भावना बढी।